पार्टी निर्णय बिना मेयरको दाबी गर्नु पदलोलुप प्रवृत्ति - Jhilko
६ भदौ,२०७६ 539 0
धरानमा यतिबेला आन्तरिक पार्टी सुदृढीकरण भन्दापनि व्यक्तिगत चाहना र निजी स्वार्थमा नेतृत्व पंक्ति लिप्त भएको देखिन्छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट धरान उप–महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तारा सुब्बा निर्वाचित भएका थिए । उनको एक वर्षअघि निधन भयो । त्यसअघि धरान ७ नम्बर वडाका अर्का अध्यक्ष भुवनसिंह मोक्तानको पनि निधन भईसकेको थियो । यसरी धरानमा २ वटा स्थानीय तहको पद रिक्त भएको छ ।
यी दुई रिक्त पदमा निर्वाचन आयोगले ०७६ मंसिर १४ गते उप–निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ । उप–निर्वाचनमा पछि करिब डेढ वर्ष धरानको स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर तथा वडा अध्यक्षले कार्यकाल पाउने छन् । त्यसपछि पुनः अर्को निर्वाचन हुने नै छ ।
नेकपाको मत हिसाव :
निर्वाचन जनताको मतदानद्वारा जनप्रतिनिधि छनौट हुने व्यवस्था हो । आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्दा जनताले आफूसँग आस्था, विश्वास र वर्ग मिल्ने व्यक्तिलाई मतदान गर्छन् । आफु संलग्न राजनीतिक दलको तर्फबाट उठेको उम्मेद्वारलाई जिताउन मतदान गर्छन् । यतिनै मात्र पनि कुरा काफी होइन । राजनीतिक पार्टीले कसलाई उम्मेद्वारका लागि टिकट दिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो । पार्टीले जनाधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जनाधार विपरित टिकट दिँदा पार्टीले हार्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ ।
धरान गत मतगणनाको हिसावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै विजय हुने पार्टी हो । तर नेपाली काँग्रेसलाई पनि त्यति कमजोर पार्टीका रुपमा हेर्नु हुँदैन । गत निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने करिब ५० हजार मतदाताले मतदानमा भाग लिएका थिए । अहिले करिब ४ हजार मतदाता थपिएका छन् । साना दलहरुको मत कांग्रेसले आफुसँग जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भने नेकपासँग अहिले ३२ हजार मत सुरक्षित देखिन्छ ।
बाँकी १६ हजार काँग्रेसको र २ हजार अन्य साना दलहरुको देखिन्छ । साना दलहरुको मत र स्वतन्त्र मतलाई मिलाउँदा पनि काँग्रेसको १८ हजारमात्र मत हुन आउँछ । यो हिसाव अघिल्लो चुनावका हो । तर, समय निकै अघि बढीसकेको छ । धरानका नेकपाको आधार किल्ला मानिएका वडाहरुमा विकास निर्माण र जनसम्पर्क कतिपय वडामा निकै अघि बढेको छ भने कतिपयमा असक्षम नेतृत्वका कारण खस्कदो अवस्थामा छ । जनताले मतदान गरेर जित वा हारको अवस्था निर्धारण हुने भएको हुँदा चुनाव अघि नै प्रतिष्पर्धीलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेर अघि बढ्नु आवश्यकता छ ।
वडामा को ?
रिक्त रहेको धरान ७ नम्बर वडाको अध्यक्षको उम्मेदवारी नेकपाका अध्यक्ष धनकुमार राईले पाउने लगभग निश्चित छ । उनले तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालको निर्वाचनमा ७ नम्बर वडाको अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । निर्वाचित अध्यक्षको निधन पछि एकीकरण भएको नेकपाको वडा कमिटि अध्यक्षमा धनकुमार चयन भईसकेका छन् त्यसैले पनि उनलाई नै वडा अध्यक्षमा नेकपाले जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नै हुन्छ । तर उनीभन्दा सक्षम उम्मेद्वार भएको खण्डमा धनकुमारले आउँदो चुनावका लागि पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउँदै लानु पर्दछ ।
वडा अध्यक्षको खासै चर्चा नभए पनि धरानमा मेयरको चर्चा भने निकै अघिदेखि हुँदै आएको छ । खासगरी काँग्रेस र कम्युनिष्टबीचको भिडन्त हुने भएको हुँदा अन्य पार्टीबाट को उम्मेद्वार बन्छ बन्दैन त्यो चासोको विषय बन्दैन । काँग्रेसमा तिलक राई, किशोर राई र सुजेन्द्र तामाङको चर्चा छ । त्यस्तै नेकपाबाट अइन्द्र विक्रम बेघा, चोत्लुङ, प्रकाश राई, मनोज मेन्याङ्बो, मिन सुब्बा, मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो, किरण राई लगायतको नाम सञ्चार माध्यममा छरपष्ट भएका छन् ।
काँग्रेस पार्टी व्यक्तिवाद र एकल निर्णयको आधारमा पार्टी केन्द्रको भर पर्नु उसको सांगठानिक धरातल हो । तर कम्युनिष्ट पार्टी भनेको जनताको मनोभावना र व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर राखेर पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्दछ, गर्नु पर्दछ । अर्थात् जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिष्ट पार्टीको मुल्यमान्यता हो । तल्लो तहबाट भएको सिफारिसलाई माथिल्लो तहबाट अनुमोदन भएपछि पार्टी उम्मेद्वारको टुंगो लाग्दछ । समयमा नै पार्टीले आफ्नो उम्मेद्वार को बनाउने भन्ने अन्यौलमा राख्ने र निर्वाचनको मुखमा मात्रै घोषणा गर्दा तत्कालिन अवस्थामा सर्वसाधारण जनता अन्यौलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण पार्टीले समयमा नै उम्मेद्वारको टुंगो लगाएर त्यसको तयारीमा तल्लो तहसम्म लान जरुरी छ । पार्टी, संगठनमा नीति मात्र भएर हुँदैन कि नेतृत्व पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेकपाले अहिले कसलाई धरान उप–महानगरपालिकाको मेयरमा उठाउने भन्ने आधिकारिक छलफल समेत चलाएको छैन । तर आकांक्षीहरु स्वयम्ले सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर आफ्नो बिचार वा इच्छा प्रचार प्रसार गर्न लगाई रहेको देखिन्छ । यतिसम्मकी पार्टी कामलाई छोडेर विश्राम गरेकादेखि पार्टी कै बिरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरेकाहरु समेत अहिले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न खोजिरहेको र मेयर बन्ने चाहना प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था देखिनु भनेको उनीहरुमा देखिएको पदलोलुपता नै हो ।
चर्चामा ल्याउन लेखक तथा पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उनीहरुले एक कप चियाको भरमा भावनात्मक रुपमा आएर फलानाको मेयरमा उठ्ने चाहना वा इच्छा छ भन्दै आम जनतामा भ्रमको खेति गर्नु पनि उपयुक्त होइन । पार्टीको आधिकारिक धारणा वा निर्णय बिना व्यक्तिका व्यक्तिगत चाहना र इच्छालाई जबर्जस्त पार्टीकरण गर्न खोज्नु कम्युनिष्ट पार्टीको नीति तथा सिद्धान्त र आचारण विरुद्ध हो । पार्टीभित्र यस्ता प्रबृत्तिले अराजकता निम्त्याउँछ ।
विपक्षीहरुले अनुमान गरिरहेका नाम भन्दा धेरै नाम आउनु र उनीहरुले सम्भावित उम्मेद्वारको तुलनामा कसलाई खडा गर्ने भन्ने अन्यौलतामा नै राखेर झ्वाट्ट आफ्नो पार्टीको तर्फबाट परिपक्व नेतालाई मेयर बनाउनु असलै होला तर पार्टीले परिपक्व देखेर मात्र हुन्न धरानको माटो, जनताको भावना र धरानसँग चिरपरिचित व्यक्ति चाहिन्छ । काँग्रेस प्रतिद्वन्द्वि शक्ति हो तर उसले जसलाई उम्मेद्वार बनाए पनि उम्मेद्वार मात्र हुने भएकोले नेकपाले सुझबुझका साथ धरानको मेयरमा उम्मेद्वार बनाउन जरुरी छ ।
नेकपा धरानको भदौं ४ गते चुम्लुङ्ग भवनमा पार्टी एकीकरण सम्पन्न भयो । १०१ जना सदस्य रहेको नेकपाको प्रथम बैठक भनि कार्यक्रममा नै घोषणा गरियो । तर उक्त बैठक बैठक जस्तै थिएन । बैठकमा सदस्यहरुले आफ्ना कुरा राख्न र निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनु पर्छ । तर सो समयमा भएको कार्यक्रमलाई बैठक भन्न सकिन्न । त्यस लगत्तै भदौ ६ गतेदेखि १९ गतेसम्म लगातार वडा पार्टीको एकीकरण भयो ।
२० वटै वडामा पार्टी कमिटिको सपथ ग्रहण सम्पन्न भयो । यसक्रममा पार्टीका नेताहरुले हरेक कार्यक्रममा धरानको मेयरका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरे । केन्द्रीय र नगरस्तरीय नेताहरुले समेत मेयरको आकांक्षीका रुपमा प्रस्तुती र हाउभाउ देखाए । यसैक्रममा नेकपाभित्र गुटबन्दीले प्रश्रय पाउने सम्भावना बढिरहेको छ । पार्टी भित्र पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको गुटभन्दा पनि व्यक्तिगत गुट बृद्धि भएको छ जसलाई समयमा नै समाप्त पारेर पार्टीलाई एकीकृत नबनाए पार्टीको भविष्य निराशाजनक बन्न सक्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नीति:
कम्युनिष्ट पार्टी भनेको जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीति योजना र कार्यक्रम बनाउने अनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माथिल्लो तहबाट निर्देशनात्मक आदेशको भरमा काम गर्ने पार्टी हो । तलबाट सिफारिस हुनु र माथिबाट अनुमोदन हुने कार्यलाई लोकतन्त्र हो । कम्युनिष्ट पार्टी साँचो अर्थको लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो । लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र वा मनपरीतन्त्र होइन । दुई पार्टीहरुबीच लामो समयपछि एकता भएको हुँदा हिजो एकले अर्कालाई गालीगलौज गरेका तिक्ततालाई सम्झेर वा दुई पार्टीबीच भएका आरोप–प्रत्यारोपलाई सम्झेर सम्बन्ध अगाडि बढाउने नभई पुरै नयाँ ढंगले सोच बनाउन जरुरी छ । विगतका तिता र नमिठा कुरालाई भुलेर पुरै नयाँ ढंगले पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्छ ।
पूर्व वा साविकका नाममा कुनै गतिविधि गर्नु अपराध हो । अहिले केहि जिम्मेवारी नपाएका नेकपाकै नेतृत्वहरु पार्टीका कार्यकर्तालाई भ्रमको खेती गर्ने र सिंगो एकतालाई नै असर पार्नेगरी गुटबन्दी गरेको देखिन्छ । त्यसरी पार्टीलाई खुइल्याउन वा पार्टीका नेतृत्वबीच थप जटिलता निम्त्याउन हुन्न । जानेर होस् या नजानेर कतिपय पार्टीका जिम्मेवार नेतृत्व वर्गबाट समेत चियापानका गफगाफका नाममा गुटमा रमाएको देखिन्छ । त्यो बिलकुलै राम्रो होइन । आफु निकटका व्यक्तिलाई जम्मा पारेर मेयरको प्रचारमा लाग्नु हुँदैन । अहिले कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरु नेतृत्व लिन तयार छु, जनताले चाहेको खण्डमा म मेयर बन्छु भन्दै बोल्नु र अन्तरवार्ता तथा लेखहरु मार्फत् आफुलाई मेयरको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको पदलोलुपता नै हो ।
क्षमता हुने व्यक्तिले त्यसरी सार्वजनिक रुपमा इच्छा जाहेर गर्ने होइन पार्टी भित्र कुरा उठाउनु पर्छ र पार्टीको निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । होइन भने पार्टीका जुनसुकै तहका व्यक्तिले आफुलाई मनलाग्दो प्रचार गर्नेछन् । नेता भनेको लोभिपापी हुने होइन त्याग र बलिदानको भावना हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्ने र जनताको बीचमा काम गर्ने व्यक्तिलाई जनताले माग गर्छन् । तर जनताको घर आँगनमा पाइला समेत नटेक्नेले मेयरको कुर्सी ताक्नु भनेको घोर अवसरवादी सोंच हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउँदा आत्मघाती मात्रै बन्ने भएको हुनाले अहिले त्यतातिर हैन पार्टीका तल्ला तहसम्म एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्छ ।
धरानमा नेकपाको नगर पार्टीको सचिवालय र कार्यालय समेत टुंगो लागि सकेको छ । सबै वडाहरुमा वडा कमिटि पनि चयन भई सकेको हुनाले अबको पार्टीको काम भनेको विभागिय कमिटिहरु धमाधम बनाउनु पर्छ । मजदुर, विद्यार्थी, पत्रकार, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, बुद्धिजीवि, शिक्षक, युवा लगायतका भातृ संगठनहरुको गठन गर्ने र त्यसका कमिटिहरु तल्लो तहसम्म चाँडो भन्दा चाँडो विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
पार्टीको पहिलो चरणको एकता प्रक्रियाले नेकपाको वडा स्तरसम्म एउटा रौनक आएको छ तर अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी कमिटिमा नसमेटिएका कारण थुप्रै आक्रोश, निराशा र चिन्ताहरु जाहेर भएका छन् । ति स्वभाविक हुन् तर पार्टीका २२ वटा विभाग तथा भातृ संगठनहरु गठन हुन बाँकी नै रहेको हुँदा सम्भवत काम गर्ने हरेक नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले नै आत्तिनु पर्ने वा पाएकाहरुले मात्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । बरु हरेक पार्टी सदस्यले आफुलाई अध्ययनशील बनाउने, पार्टीका आन्तरिक सर्कुलर खोजी पढ्ने, विधान, घोषणा पत्र, मुखपत्र आदिको अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने बानीको अभ्यास गर्नुपर्छ । पार्टी भन्दा व्यक्ति माथि नहुने भएको कारण सबै नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको अनुशासन र गोपनीयतालाई कायम राख्नुपर्छ ।
पार्टी सदस्य प्रत्येकले सपथ ग्रहण गर्दा भनेका छन् ः म पार्टीको गोपनीयतालाई कायम गर्नेछु, मजदुर, श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गर्नेछु । तर कसैले पनि भनेको हुँदैन कि म मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्नेछु भनेर । यसकारण अबको समय भनेको पार्टी एकीकरणलाई सवल र मजबुत बनाउने नै हो । जब पार्टी तल्लो तहसम्म बलियो बन्छ तब पार्टीले बनाएका योजनाहरु सफल बन्छन् तर व्यक्तिगत रुपमा इच्छा जाहेर गर्नेले पार्टीलाई भन्दा पनि आफुसँग भएको सम्पत्तिलाई आधार मानेको हुन्छ, त्यसका भरमा सिंगो पार्टी क्रियाशील बन्दैन ।
त्यसैले पनि अबको मेयर भनेको धरानको माटोसँग परिचित, जनताको सुखदुखमा सहभागि हुन सक्ने, विकास निर्माणका अधुरा र अपुरा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने, राजनीतिमा दिलोज्यान दिएर पार्टी र क्रान्तिप्रति बफादार व्यक्तिलाई नै पार्टी मेयरको उम्मेद्वार बनाउने छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउन धरानको पुरै पार्टी पंक्ति परिचालित हुनेछ तर अहिले मेयर को बन्ने भन्ने विषयमा हतारमा बहस नगरौं पहिला पार्टीलाई सशक्त र बलियो बनाऔं, त्यसपछि धरानको भिजन र साच्चीकै काम गरेर देखाउन सक्ने खालको नेतृत्वप्रति सचेततापूर्वक ध्यान दिऔं । अहिले भईरहेका गतिविधिमा परिवर्तन गरौं । पार्टीको गन्तव्य मेयरको चुनाव हैन, वर्ग मुक्ति र समानताको लडाई हो । पदका लागि होइन राजनीति परिवर्तनका लागि गरौं । समृद्ध धरान र सुखी धरानेको संकल्पलाई पुरा गर्ने मेयर चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि परौं ।
५ फाल्गुन,२०७५0382
३ चैत्र,२०७५0209
बाबुरामले धोका दिए भन्दै हिसिलालाई भेटेर प्रचण्डले दिए...
५ जेठ,२०७६0594
पार्टी एकता भएपछि असहमतिसहित डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफूहरुले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र...